Ciyaarta Kalluunka Khamaarka Ocean King 3 Waxaa sii dheer Buffalo Thunder - Ciyaaraha Kalluunka ee Faa'iidada Sare leh. Habeeyn Software Software. Boorar aad u fiican.
Hoyga » Wax soo saar » Ciyaarta Kalluunka Khamaarka Ocean King 3 Waxaa sii dheer Buffalo Thunder
Ciyaarta Kalluunka Khamaarka Ocean King 3 Waxaa sii dheer Buffalo Thunder
Dhibaatada la wanaajiyey oo gaadhay heer 50
Khamaarista Ciyaarta Kalluunka ee Faa'iidada oo Leh 5% ~ 50%
Waxaa laguu habeeyay inuu yahay ciyaar ciyaar ahaan 2 ~ 10 ah
Sawirro 3D tayo sare leh oo leh Calaamadaha Kalluunka Dheeraadka ah
Sida loo ciyaaro Ciyaarta Kalluunka Khamaarka Ocean King 3 Waxaa sii dheer Buffalo Thunder
Ujeedada ciyaarta ayaa ah in ciyaartoydu ay adeegsadaan qoryahooda iyo seddexdeeda qaab - caadi, la dardar galiyay oo ujeeddada la higsanayo - in la qabto kalluun badan intii suurtagal ah waqtiga ciyaarta.
Gudaha Khamaarka Ciyaarta Kalluunka Ocean King 3 Waxaa sii dheer Buffalo Thunder waxaa jira kalluun kala duwan oo la qabto, dhammaantoodna waa kuwo qiimahoodu qiimeeyo oo kaladuwan. Ciyaartoydu waxay kordhiyaan dhibcaha dhibcaha tiradooda iyo qiimaha kalluunka ay qabsadaan inta lagu jiro ciyaaraha.
Waxa ugu weyn Ocean King Plus: Buffalo Thunder ciyaarta ciyaarta waxaa lagu dhejiyay qaababka iyo cayaaraha mini. Kuwani waa muhiim in la isticmaalo madaama ay fursad siinayaan ciyaartoy si ay u helaan dhibco badan isla mar ahaantaana, suurtagalnimada in lagu kasbado guulo badan.
Tilmaamaha gudaha Khamaarka Ciyaarta Kalluunka Ocean King 3 Legend dheeraad ah ee Phoenix ku dar:
1. Buffalo – madax
Marka Buffalo si guul leh ayaa loo garaacayaa, silsiladda ayaa loo tuuri doonaa si loo qabto oo waxay gali doontaa Xaaladda Halganka. Mudadii halganka, burburin kasta oo ay keento Buffalo waxay dhibco badan ka heli doontaa. Haddii Buffalo la qabto waxay bilaabi doontaa cadho ka sii badan caddibihiisana wuxuu ku guuleysan doonaa abaalmarin ka sareysa.
2. Phoenix – Madaxa
Markii ciyaartoy qabsado Phoenix raxan Phoenix wuu duulayaa si uu u qabsado shaashadda oo dhan.
Qabashada Mermaid waxay u yeeri kartaa sideed mowjadaha Mermaids si ay u weeraraan dhammaan kalluunka badda ku jira.
Tani waxay ku siineysaa fursad aad ku badiso guushaada.
4. Jabniin Hammer Crab
Qabashada Dharka Hammer Cars waxay ku dhufataa hillaac hoos iyo dusha shaashadda iyagoo dilaya jilayaasha hareeraha ka duulaya.
5. Super Bomb Cars
Qabashada Bambooyinka Qarxinta waxay kicineysaa weerarka bambaanooyinka ee xirxiran ee qarax ballaaran.
Waxay siin kartaa ciyaartooy fursad ay ku caawiyaan qabsashada kalluunka gudahooda.
Waxaad heli doontaa hal talaal adiga oo adeegsanaya laambarka leysarka muddo xadidan.
7. Jebinta Daroogada
Marka Qabashada Muhiimka ah ee Jabaadku uu dab qabsado waxay ku dhaqaaqdaa dabinta, galitaanka aagga oo laga yaabo inuu helo fursad lagu qabto kalluunka.
Qoditaanka ayaa qarxay muddo ka dib, waxaana laga yaabaa inay ku siiso fursad aad ku qabato kalluunka inta u dhexeysa baaxadda qaraxa.
8. Carsaanyo Cas
Kubadda Dahabiga ah waa ciyaar gunno ah. Waxaad riixaysaa batoonka SHOOT si aad u joojiso roulette.
Tirada weyn ee lambarka "roulette", dhibcaha sare.
Ciyaarta Kalluunka Khamaarka Ocean King 3 Plus Legend of Phoenix wuxuu balan qaadayaa saacado tartan xoogan oo dhexmara ciyaartoydu iyadoo ay ugu mahadsantahay awoodeeda dhamaadka aan dhamaadka laheyn, xuruuf aan caadi aheyn oo cajiib ah, iyo hubka wax baabi'iya. Laga soo bilaabo Mermaid iyo Mystic Dragon Power ilaa xoojiyayaasha Duufaanta Dabka, Ciyaartoyda ayaa jeclaan doona abaalmarinta qarsoon ee ciyaartan. Qaar ka mid ah jilayaasha aan jecel nahay iyo hubka ayaa ka mid ah:
Dheecaanka Phoenix: Waxay ku booddaa shaashadda oo dhan si ay u siiso ciyaartoyga iska leh abaalmarinno deeqsinimo leh
Dabayl Naarta Dabka: Ku shubaa shaashadda oo dhan si loo qabto kalluunka oo wuxuu siiyaa ciyaartoy kumanyaal qadaadiic lacag ah ah
Kalluunka Vortex: Waxay abuurtaa vertex xoog leh aagag kala duwan oo shaashadda ah si loo burburiyo kalluunka u dhow
Laser Beam: Caleemo ballaaran, laser awood badan shaashadda si loo burburiyo wax kalluun ah oo jidkiisa ku jira
Super Bomb: Shaashadda ayuu ku faafayaa abuuritaanka qaraxyo awood badan dhibcaha ugu badan
Dhoolatus Hammer: Waxay soo saartaa qarax xoog leh kaasoo nadiifiya wax walboo jilayaasha shaashada ku jira
Fkacsanaan Arcade Giyo Liiska
1. Software Topgame R&D iyo wax soosaarka Shiinaha
2. Customishigh haysashada softiweerka software-ka
3. Kushiin tayo sare leh oo tayo leh ciyaarta golaha
4. Alaabada shirkadaheena waxay ciyaaraan qorshe u gaar ah, sawir qurux badan, muuqaal qurux badan, nidaamyada heerka koowaad,qalabka lagu kalsoonaan karo, dakhli deggan, cusboonaysiinta cusub iyo waqtiga ku habboon
Xidhmada & Gaarsiinta
Waqtiga dirida : 15~ 20 maalmood badda dhexdeeda
S: Ma ku horumarin karaa golayaasha ciyaarta aniga oo adeegsanaya TAS?
A: Haa waad awoodaa! TAS waxay bixisaa adeegyo horumarineed. Si fudud noogu dhiib fikradahaaga oo aan u hoggaansami karno shuruudahaaga. Waxaa jira tiro yar oo amarro ah oo la xidhiidha xulashooyinka horumarineed. Nagala soo xiriir sicirka iyo wakhtiga la xidhiidha horumarka ciyaarta khamaarka.
S: Waa maxay damaanada wax soo saarkaagu?
A: Waxaan gadaal ka taaganahay tayada alaabadayada oo waxaan hagaajin doonnaa ama badali doonnaa badeecad kasta oo cillad ku timid cillada soo-saaraha awgeed. Markii aad la xiriirayso taageerada farsamada ee leh su'aalaha dammaanadda, fadlan sii lambarka taxanaha badeecada si aan u xaqiijin karno taariikhda iibsashada. Guddiyada Ciyaaraha: 12 damaanada bisha laga bilaabo taariikhda iibsashada.
S: Miisaaniyadda guddiga PCB miyey noqon kartaa mid la dayactiro? Muddo intee le'eg ayay qaadan doontaa in la dayactiro iyo kharashka lagama maarmaanka ah?
A: Hadday ku jirto muddadii damaanad-qaadida oo ay waxyeeladu u sabab tahay arrimo aan-aadane ahayn, markaa waxay wali xaq u leedahay faa'iidooyinka damaanada. Hadday ka badan tahay muddada dammaanadda, waxaan kula soo socodsiin doonnaa qiimaha lagama maarmaanka u ah dayactirka iyo hagaajinta sida ugu dhaqsaha badan. Na sii 3-7 maalmaha shaqada in la hagaajiyo (marka laga reebo waqtiga dhoofinta).
S: Sidee ayaan u xallin karnaa haddii aanaan si guul leh u rakibi karin guddiga lana kulmin arrimo farsamo?
A: Waad u tixraaci kartaa buugga wax soo raaciyey ee ku lifaaqan buugga wax soo raaciyey iyo tilmaamaha fiirsashada markii la iibsado.
Ciyaarta Kalluunka, Game Software
2020 Ciyaar Moobaylka Khamaarka Khamaarka Sare ah
Kalluumeysiga Arcade Game Faa'iidada Sare Kylin Thunder
Boodh-O-Daabasho Wejiga Daabacaadda Ciyaaraha Badan
Slot Makiinadaha Khamaarka CVEER Waxaa qoray IGS
Khamaarka Khamaarka Tooshka Laylka Farxadda leh Aristocrat
Mashiinka Slot Machine Khamaarka Indhaha of Fortune Waxaa qoray Aristocrat
Mashiinada Khamaarka ee lagu iibiyo Lacagta Dhab ahaantiisa ee Dragon by Aristocrat